Ụdị mmụta: akụkọ ọjọọ abụọ (kamakwa nke ọma abụọ) | Ọzụzụ nghọta
Ndị na -arụ ọrụ na akparamaagwa nke mmụta, agụmakwụkwọ, nkuzi ma ọ bụ agụmakwụkwọ na -emecha zute ajụjụ nke "ụdị mmụta". Echiche ndị bụ isi a na -agbalịkarị ịgafe bụ abụọ:
onye ọ bụla nwere usoro mmụta nke ya (dịka ọmụmaatụ, anya, auditory ma ọ bụ kinesthetic);
onye ọ bụla na -amụta nke ọma ma ọ bụrụ na -enye ya ozi ahụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụdị mmụta ya.
Ndị a bụ echiche na -atọ ụtọ, nke na -enye echiche na -adịghị ahụkebe maka onodu mmụta (nke a na -ahụkarị dị ka "ihe siri ike"); ha na-enye anyị ohere ilele ụlọ akwụkwọ (yana gafee) dị ka ọnọdụ nwere ike ike yana yana ahaziri onwe ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịkwa akwa.
Ma nke a ọ̀ bụ eziokwu?
Nke a na -abịa mbụ akụkọ ọjọọ.
Aslaksen na Lorås ha duziri obere nyocha nke akwụkwọ sayensị na isiokwu ahụ, na -achịkọta nsonaazụ nke nyocha ndị bụ isi; ihe ha hụrụ, data dị n'aka, bụ nke a: na -akụzi dịka usoro mmụta si amasị onye ahụ (dịka ọmụmaatụ, ịnye ozi n'ụdị elele maka "ndị na -ekiri") ọ gaghị eweta uru ọ bụla a na -apụghị ịgụta ọnụ karịa ndị na -amụ ihe n'ụdị ihe ọzọ karịa nke masịrị ha.
N'echiche a, ekwesịrị ịhazigharị ụzọ nke ọtụtụ ndị nkuzi, ọkachasị ịtụle ego ọrụ ọzọ nke gụnyere imezigharị nkuzi na -eso ihe ngosi nke ihe dị ka akụkọ ifo kama ịbụ eziokwu.
Yabụ kedu njikọ dị n'etiti ụzọ nkuzi na nkwenkwe n'ihe gbasara ụdị mmụta?
Nke a na -abịa ozi ọjọọ nke abụọ.
Nyocha ọzọ nke akwụkwọ sayensị na isiokwu a rụtụrụ aka na imirikiti ndị nkuzi (89,1%) yiri ka ha kwenyesiri ike na ịdị mma nke agụmakwụkwọ dabere n'ụdị mmụta. Ọ dịghị ihe na-agba ume ọzọ bụ na nkwenkwe a anaghị agbanwe nke ukwuu ka anyị na-aga n'ihu n'ọrụ ọtụtụ afọ n'ọhịa (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na a ga-ekwurịrị, ndị nkuzi na ndị nkuzi nwere agụmakwụkwọ kacha elu yiri ka ọ kacha kwenye na akụkọ ụgha a. ).
Gịnị ka ị ga-eme mgbe ahụ?
Nke a na -abịa mbụ ozi -ọma.
Nzọụkwụ mbụ nwere ike ịbụ ịgbasa ozi ziri ezi n'oge ọzụzụ nke ndị nkuzi na ndị nkuzi n'ọdịnihu; Ee e, ọ dị ka igbu oge: n'eziokwu, n'ime otu nyocha akwụkwọ ahụ, achọpụtara na, mgbe ọzụzụ a kapịrị ọnụ, pasent ndị nkuzi ka kwenyesiri ike na ọ bara uru ịbịaru dabere n'ụdị mmụta (na nlele. nyocha, anyị gafere site na nkezi nke 78,4% gaa na nke 37,1%).
Ọ dị mma, ụfọdụ na -echezi etu a ga -esi mee ka mmụta ụmụ akwụkwọ ka mma ebe ọ bụ na ụzọ ị mụta ihe adịghị ka ọ dị irè.
Ọfọn, ebe a ka ọ dị ozi ọma nke abụọ: usoro maka nkuzi na mmụta dị irè (egosiri na nnwale) enwere e anyị enyefeela ha otu akụkọ. Ọzọkwa, n'ọdịnihu dị nso, anyị ga -eji isiokwu a laghachi isiokwu edemede ọzọ a na -arara mgbe niile maka usoro kachasị dị irè.
Aslaksen, K., & Lorås, H. (2018). Ụkpụrụ mmụta mmụta ụdịdị akọwapụtara nke ọma: obere nyocha. Frontiers na akparamaagwa, 9, 1538.
Newton, PM, & Salvi, A. (2020, Disemba). Ogologo oge ole ka ikwere n'ụdị mmụta neuromyth, ọ dịkwa mkpa? Ntụle nhazi usoro. N'ime Fkèala na Mmụta(Mpịakọta 5, p. 270). Fkè ala.
mmụta, mmụta ọnụ, mmụta anya, ụdị mmụta
Ụdị mmụta: akụkọ ọjọọ abụọ (kamakwa nke ọma abụọ)2021-08-232021-08-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/stili-di-apprendimento.-due-cattive-notizie-ma-anche-due-buone.jpg200px200px